Xiaomi Pro pụtara na 5,5 "ihuenyo na Snapdragon 821 mgbawa | Androidsis
Xiaomi Pro na-egosi ihe ngosi 5,5 ″, Snapdragon 821 na 6GB nke RAM
Anyị ka na-eche maka azụmaahịa mba ụwa nke Xiaomi. Companylọ ọrụ ahụ nwere jisiri ike bilie n'etiti ndị kacha mma na ya pọtụfoliyo nke ọnụ bụ ihe kasị mma nwere ike ịchọta. Otu usoro Redmi ya, nke ewepụtara afọ 3 gara aga, eruola ere ihe karịrị 110 nde ekwentị. Site na ihe mmadụ nwere ike mata ngwa ngwa ihe kpatara anyị ji esochi mgbanwe nke ụlọ ọrụ a nke onye exGoogler siri: Hugo Barra.
N'oge na-adịbeghị anya, anyị mụtara na ha chọrọ ịgbasa ụdọ nke smartphones na ụfọdụ njedebe dị elu nke na ndị na-akwado ụlọ ọrụ a ga-adaba nke ọma iji nwee nke kachasị mma n'ahịa n'ihe gbasara ngwaike. Ọ bụ ugbu a na asịrị erutela banyere a ọhụrụ elu-ọgwụgwụ ama mgbe onye nhazi ụlọ ọrụ Liwan Jiang kwupụtara na a ga-enwe ohere nke ọhụụ pụtara na ọkara nke abụọ nke 2016; Anyị na-ekwu maka Xiaomi Pro.
Ekwentị ọhụrụ a, nke akpọrọ dị ka Xiaomi Pro ruo nwa oge, ga-abata na nkọwapụta dị elu. Site na ihe amara site na ozi enyere, ọ ga-enwe a 5,5 ″ Full HD (1920 x 1080) Ngosipụta OLED ga-enwekwa n’ime eriri afọ ya na nso nso a mara ọkwa Qualcomm Snapdragon 821 mgbawa. Ozi a fọrọ nke nta ka ọ bịarute mgbe ị matara na ekwentị mbụ nke ga-enwe mgbawa ọhụrụ ahụ ga-abụ ihe Asus ZenFone 3 Deluxe. Akụkụ ndị ọzọ nke ekwuru na Xiaomi Pro bụ na ọ ga-enwe ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na ihu.
Nkọwapụta asịrị nke Xiaomi Pro
5,5 ″ Full HD (1920 x 1080) OLED gosipụtara site na AUO
Qualcomm Snapdragfon 821 mgbawa na Adreno 530 GPU
4 GB / 6 GB Ram, 64GB / 128GB n'ime ebe nchekwa
Igwefoto azu 12MP, Sony IMX260 ihe mmetụta na ISOCELL S5K2L1
3,700 mAh batrị
Anyị amaghị ihe nkọwa banyere ekwentị a anyị ka nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme iji nweta ntapu ohuru ma wulite ekwentị dị elu nke ga-abịarute oge tupu njedebe nke afọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi Pro na-egosi ihe ngosi 5,5 ″, Snapdragon 821 na 6GB nke RAM
Adobe Lightroom ka emelitere na 2.1 yana igwefoto jikọtara ọnụ